"Kanginankinga nabalwisa ubukhosi bami" - iSilo - Ilanga News
Home Izindaba “Kanginankinga nabalwisa ubukhosi bami” – iSilo
“Kanginankinga nabalwisa ubukhosi bami” – iSilo
Sezibekiwe izinsuku zokugeza nokukhumula ondlunkulu bakaMdlokombana
ISILO uMisuzulu sithi kasinagqubu nabasilwisayo.
SIPHEFUMULE okokuqala ngobumuncu bobudle-lwano baseNdlu-nkulu kaZulu iSilo esisanda kuphakanyiswa, uMisuzulu kaZwelithini, ngesikhathi sinengxoxo ekhethekile nesiteshi sikamabonakude, i-eNCA izolo ngoLwesithathu ntambama.
ISilo uMisuzulu (osesithombeni) siveze ukuthi enye yezinto eziseqhulwini kusona, wukubuyisana nomndeni waso endlunkulu njengoba kunombango oqhubekayo ngokuphakanyi-selwa kwakhe kulesi sikhundla.
Kunodaba olusenkantolo oluthinta amafa eSilo uZwelithini nesihlalo sobukhosi.
Uveze nokuthi uzimisele ngokwakha ubudlelwano obusha nezinhlaka ezahlukene ukuthuthukisa isizwe samaZulu.
Enkulunweni yeSilo uMisuzulu, sithe kasibabambele amagqubu abaphikisana nokuphakanyiswa kwaso, okubalwa kubona ubabekazi wakhe, uMntwana Thembi Ndlovu, noyise omncane, uMntwana Mbonisi, kanjalo no-mfowabo, uMntwana uSimakade abagagule ngamagama.
Uthe ubathanda ngendlela eyisimanga ngoba bayigazi lakhe, bakhule ndawonye noMntwana uSimakade.
Uqhube ngokuthi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga kubuyiswane, uMntwana uSimakade abuyele ekhaya njengoba bekhule ndawonye. ISilo uMisuzulu sithe nje-ngoba sisesihlalweni nje, sifisa ukuqhubeka lapho uyise eshiye khona ngaphambi kokuba siqale ezaso izinhlelo.
Kulezi zinhlelo esithe sizozibheka ngeso elijulile, wudaba lomhlaba owenganyelwe yiNgonyama Trust. Uthe kufanele uvikelwe futhi usetshenzwe ukuze kuthuthuke isizwe samaZulu.
Uthe lokhu kungenzeka uma kubanjiswene futhi zonke izinhlaka zisebenzisana ngenhloso yokuthuthukisa isizwe. Uphinde waveza ukuthi uzimisele ngokusebenza ngokubambisana nohulumeni wesifundazwe, oholwa nguNdunankulu Sihle Zikalala, amchaze njengendoda enobuhlakani futhi eqotho, noNdunankulu kaZulu, uMntwana Mangosuthu Buthelezi.
Uphinde washayela isipikili ngokusukumela udaba lokuhlukunyezwa kwabesifazane nezi-ngane, okuyinto ebihamba phambili kuyise. Uthe ngaphandle kokuthi lolu daba lumqoka, kodwa naye siqu akahambisani nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane.
ISilo uMisuzulu siphinde saphefumula ngengoduso yaso, uNkz Ntokozo Mayisela waseNewcastle, esisanda kuthumela amalobolo kubo. Sithe okwama-nje kusenzima ukuqagula ukuthi zizowushaya nini njengoba indlu-nkulu isazilile.
“Uma isimo sikanje kuba
wumcimbi omkhulu ngakho kuni-ngi okumele kubhekwe ngapha-mbi kokuba uhlelwe, ikakhulukazi njengoba siphila ngaphansi kokhuvethe okumele silandele imigomo yalo,” kusho iSilo.
Sigcizelele ukuthi siyazifela ngesithandwa saso. Siveze ukuthi sebethandane iminyaka emini-ngi, babusiswa ngamazinyane amabili esiwathanda ukufa.
Sibuzwa ngodaba lwesithe-mbu, sithe okwamanje sisajabule ngokuba nondlunkulu oyedwa, kodwa okungasho ukuthi siyasi-balekela isithembu, kwazise sikhule ngaphansi kwaso.
Sithe kuningi esikufundile kubazali baso, (kwiMbube uZwe-lithini nakunina iNdlovukazi Mantfombi Zulu, uMaDlamini) njengoba sibe nenhlanhla yokusebenza eduze kwabo besa-dla anhlamvana.
“Umama ubeyikho konke kimina, engumeluleki wami, engiqaphelisa nangempilo nje jikelele,” kusho iSilo.
Sinxuse isizwe samaZulu ukuba simethembe njengoba naso sizethemba ukuthi sizokwazi ukuhola ngobuqotho nange-ndlela enenqubekela phambili.
Sichaze usuku lokufundwa kwefa likanina uNdlunkulu uMantfombi, njengolwamkhulisa kakhulu. Ngalolu suku kwaphoqeleka ukuba iSilo uMisuzulu sibalekiswe ngenxa yokushuba kwesimo.
Sichaza ngalolu suku, sithe savuka siyizinyane, lashona sesiyisilo okuyinto eyasiphoqa ukuba sikhule ngokuphindiwe ngokushesha okukhulu njengoba sisaqhubeka nokukhula.
* Indlunkulu izokwenza umcimbi wokugeza nokukhumula inzilo kondlunkulu okulindeleke ukuba uthathe izinsuku ezinta-thu kusukela ngomhla ka-16 kuya kumhla ka-18 kwephezulu.
Ngokwesitatimende esithunye-lwe nguMntwana uButhelezi, lo mcimbi uzonika ondlunkulu ithuba lokuhlambuluka futhi bakhumule nenzilo ukuze bakwazi ukuqhubeka nempilo yabo yansuku zonke.
Ngokwalesi sitatimende, isikhathi esifushane sokuzila kondlunkulu sihambisana
nomyalelo weSilo esisanda
kukhothama sokuzilelwa izinya-nga ezintathu.
Kulindeleke ukuba ngonyaka ozayo kube nomcimbi omkhulu wenhlambuluko wesizwe sonke samaZulu ngosuku olusazomenyezelwa.
Previous articleUTshatha ushiye angalazi kofakazi bakaJehova
Next articleIlanga Easter Promotion